Jamaica Yakagadzirira Misangano Yakakosha neCanada neUSA Partner
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Jamaica Yakagadzirira Misangano Yakakosha neCanada neUSA Partner
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • Caribbean • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau
Jamaica Tourism Gurukota uye Mari & JHTA Cushioning Impact yeCOVID-19 paVashandi Vekushanya
Jamaica Gurukota Rezvekushanya, Hon. Edmund Bartlett, pamwe nevamwe vakuru vakuru vekushanya, vachange vachipinda mumisangano yakateedzana mumisika mikuru mikuru yechitsuwa ichi, United States neCanada, kutanga mangwana, mukuyedza kuwedzera vanosvika kunzvimbo iyi pamwe nekusimudzira kumwe kudyara. mubazi rekushanya.
Chitsuwa cheJamaica chiri kushanda kuti chisangane nedambudziko rekudonha kwekufamba nekuda kwechitatu wave COVID-19.
CDC zvakare yakaratidza nyika seLevel 4 yekuve nematanho akakwirira ecorononavirus.
Iyi misangano yakarongedzerwa kuitira kusimbisa vanobatana mukushanya saka ivo vacharamba vachishambadzira kwavanoenda.
Bartlett akataura kuti rwendo rwacho rwakakosha, sezvo data rakagamuchirwa nebazi rinoratidza kuti kudiwa kwekufamba kuenda kuJamaica kwakawira mukati memazuva manomwe apfuura. Iye anotenda kuti "izvi zvinokonzerwa nematambudziko anounzwa nefungu rechitatu re COVID-7 riri kukanganisa chiwi, pamwe neUS Centers for Disease Control and Prevention's (CDC) ichangoburwa Chikamu che19, chakapihwa Jamaica mazinga akakwirira kwazvo eCOVID-4. ”
"Jamaica inoramba iri nzvimbo yakachengeteka uye tinoda kuvimbisa zvido zvedu zvekushanya nezveizvi. Chinhu chakakosha ndeedu maResort Resilience Corridors, ayo ane hutachiona hwehutachiona hwakaderera pasi pe1%. Chigadzirwa chedu chinoramba chakasimba uye chiri pamusoro chechokwadi, kunyangwe paine matambudziko. "Saka ticharamba tichifambisa hurongwa hwekutengesa kuti tikwanise kudzikisira chero zvingangoitika," akadaro Bartlett.
Nhevedzano yemisangano yakarongwa kuti ibatanidze vashandi vekushanya, vezvenhau nevamwe vanobatika muUSA neCanada, kusimbisa nekusimbisa kuvimba muzvirongwa zvavo zvekudyara nekushambadzira kwenzvimbo.
Gurukota, vakasiya chitsuwa nhasi, pamwe naMutungamiriri weVashanyi, Donovan White; Sachigaro weJamaica Tourist Board, John Lynch, pamwe neSenior Strategist mubazi rezveKushanya, Delano Seiveright, vachasangana nevatengesi vakuru vekushanya.
Ndichiri muUnited States, timu yevakuru vezvekushanya yakarongwawo kusangana nevatungamiriri vanobva kuAmerican Airlines neSouthwest Airlines. Vachasanganawo nevakuru vanobva kumitsetse mikuru yakadai seRoyal Caribbean neCarnival pamwe nevatungamiriri vanobva kuExpedia, Inc., iyo hofisi huru yekufambisa pamhepo pasirese, kambani yechitatu pakufamba muUS, uye yechina pakureba pakufamba. kambani munyika.
Mimwe misangano muCanada inozotarisa kushambadzira uye ichawedzera vese vakakosha vanobatana navo kusanganisira ndege, seAir Canada, WestJet, Sunwing, Transat neSwoop. Saizvozvowo, vachasangana nevashanyi vanoshanya, vatengesi vezvekushanya, vekutengesa uye vezvenhau vazhinji uye vanokosha veDiaspora.
“Tinoda kuvimbisa vatinoshanda navo, uye vashanyi vedu kuti tiri kuita zvese zvatinogona kuti vaone kuti kushanya kwavo kuchitsuwa kuchave kwakachengeteka. Mitemo yedu iriko kuti muve nechokwadi chekuti muchakwanisa kushanyira zvinokwezva zvedu uye muve neruzivo rwechokwadi rweJamaican, asi nenzira yakachengeteka uye isina musono, ”akadaro.
“Tange tichiwedzera simba rekuona kuti vashandi vedu vekushanyi vabaiwa zvakakwana uye vaona budiriro kubva pachirongwa ichi. Naizvozvo, iwe unogona kuva nechokwadi chekuti vashanyi vari munzvimbo yakachengeteka. "Chokwadi kuchengetedzeka kwedu nemitemo yedu inopembererwa pasi rose uye zvaive zvakakosha kwatiri kukwanisa kugamuchira vaenzi vanopfuura miriyoni imwe kubva patakavhura miganhu yedu," akadaro Bartlett.
Gurukota Bartlett nedzimwe nhengo dzechikwata vakatemerwa kudzokera Jamaika musi waOctober 3, 2021.